साताको ब्लगर: उज्वल थापा - MeroReport
साताको ब्लगर: उज्वल थापा
उज्वल थापा एक सकृय सामाजिक अभियानकर्ता र उध्यमी हुन । सामाजिक संजालमा धेरै समय बिताउने उनले यो माध्यमबाट परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरेका छन । उनी आफ्नो रुची नेपालीहरुको दिमाग घोच्ने र घचघच्याउने रहेको बताउँछ्न । अमेरिकामा स्नातक तहको शिक्षा लिएका उज्वल अहिले काठमाडौंमा बसोबास गर्छन ।
आफुलाई उद्धमी, अभियानकर्ता र कृषक भन्न रुचाँउने उज्वललाई हामीले यस पटकको साताको ब्लगरको रुपमा फिचर गरेका छौँ :
सामान्य रुपमा तपाइँको दिनचर्या कसरी बित्छ ?
सोसल मिडिया मार्फत धेरै नेपालीहरुलाई आफु बदल्न प्रेरित गर्दै जान्छ दिनभरि आजकल। अरु बेला लेख लेख्छु whynepal.com मा। समय भ्याए राम्रा नेपालीलाई अरु राम्रा नेपालीहरुसँग नेटवर्क गराऊँछु। मेरो सुचना प्रविधिको उद्योगका केहि काम पनि गर्छु, र सामाजिक अभियानमा लागेकाहरुलाई पनि आफ्नो सर-सल्लाह दिन्छु र नव उद्दमी वा उद्दमशील नेपालीहरुलाई पनि आफ्नो उद्दोग फस्टाउन बिभिन्न सुझाब दिदैँ जान्छु । अहिले मेरो मुख्य काम नै धेरै भन्दा धेरै उद्दमी र सामाजिक अभियानकर्ता बनाउनमा कस्सिएको छु।
तपाईंको ब्लग whynepal.com को बारेमा केहि बताइदिनुस न ?
म धेरै जसो जिम्मेवारी, जवाफदेयिता, सम्बृद्धि अनि नेतृत्व, सकारात्मक परिवर्तन र उद्धमशिलताको बारेमा लेख्छु । दिनमा लगभग १०० देखि १००० सम्म भिजिट हुन्छ । अलि गंभिर र घोच्ने खालको लेख भएको हुनाले धेरै हेर्दैनन क्यारे । मेरो लेख्नुको औचित्य नै मानिस भित्र जागरण ल्याउने हो, गाह्रै हुन्छ :)
कस्तो प्रतिकिया पाउने गर्नु भएको छ आफ्नो लेख मार्फत ?
जति जति लेख्छु त्यति त्यति सन्तुष्टि बढ्दै जान्छ । आफ्नो लेखबाट अरुले भन्दा आफैले बढि सिक्छु कि जस्तो लाग्छ।
तपाईं उध्यमी , सामाजिक अभियानकर्मी साथै ब्लगमा मा उत्तिकै सकृय हुनुहुन्छ । कसरी समय मिलाईरहनु भएको छ ?
यी सबै काम आफु र नेपालीहरु भित्र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कोशिश भएकोले समय मिलाउन गाह्रो हुदैँन। फेरि ईन्टरनेट सुचना प्रबिधिले गर्दा यी कुराहरु सबै गर्न सजिलो बनाएको छ।
आफ्नो अभियानको लागि कुन - कुन सामाजिक संजाल प्रयोग गर्नु हुन्छ ? कतिको समय बिताउनुहुन्छ सामाजिक संजालमा ?
धेरैजसो फेसबुक र ट्विटर चलाउँछु । अनि अलि अलि लिङ्क्डईन । म दिनको ३-४ घण्टै बिताँउछु आजकल सामाजिक संजालमा । नेपालीहरु दिमाग घोच्ने काम गर्छू ।
तपाई एक सामाजिक अभियानकर्मी यसको बारेमा केहि बताइदिनुस न ? के - के गर्नु हुन्छ ?
मैले नेपालीहरुलाई नेपाली बन्न अभिप्रेरित गर्न प्रयास गर्दैछु। यो पढ्नुहोला :
'परिवर्तनका लागि हामी नेपाली ' जस्ता सामाजिक संजाल अभियानको अभियानकर्ता हुनुहुन्छ? । यी सामाजिक संजाल अभियानको बारेमा केहि बताइदिनुस न ?
'परिवर्तनका लागि हामी नेपाली ' (नेपाल युनाइट्स) ३०,००० भन्दा बढि नेपालीहरु मिलेर बनेको सन्जाल हो। यो नेपाली नागरिक अभियानले चुप लाएर बसेका हामी नेपाली जनतालाई एक जुट बनाएर राजनितिक नेतृत्वलाई नेपाली जनता प्रति उत्तरदायित्व बनाउने काम र जनताको कुरा प्रति गंभिर भएर सुन्ने बाताबरण बनाउन खबरदारी गर्नेछ । यसको मुल मुद्दा नै नागरिकलाई जिम्मेवार र नेतृत्वलाई जवाफदेहि बनाई नेपालीहरुलाई एक बनाउनु हो।
नेपाल बन्द विरुद्द समुह गठन गरेर बिभिन्न कार्यक्रम गर्नु भएको थियो । यसको बारेमा पनि केहि बताइदिनुस न ?
हामीले बन्द बिरुद्ध बिभिन्न नागरिक समाज समुह मिलेर बन्दको अबेज्ञा गरिराखेका छौँ। यसमा फेसबुक मार्फत ‘DIE nepal bandh DIE’ भन्ने ५००० भन्दा बढि सन्जाल बनाएका छौँ । हरेक बन्दको दिन आफ्नो शहरको मुल ठाऊँ (काठमाडौँमा ठमेल अगाडि) भेला भएर नेपाल खुल्ला र्‌याली गर्छौँ । नसकेको बेला उभिएर भए नि बिरोध देखाउँछौँ ।
सामाजिक अभियानकर्मीको साथ - साथै एक सफल उध्यमी पनि हुनुहुन्छ । तपाईंको “आनट्रोप्रनियोर फर नेपाल” (नेपालको लागी उद्योगी) को बारेमा केहि बताइदिनुस न ?
“आनट्रोप्रनियोर फर नेपाल” (नेपालको लागी उद्योगी) एउटा सर्जनशील, उद्यमी सोच भएका व्यक्तिहरुको सन्जाल हो, जोसँग नाफा वा गैर नाफाको लागि ठूलो बनाउन मिल्ने बिचारहरु छन् । हामी यी नवीन विचारहरुलाई नेपालको बिकासको लागि कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेका छौँ
हामी केहि साथीहरुबाट सुरु गरेको अहिले ७००० जति उद्धमीहरु सन्जाल बनेको छ। एक चोटी यसमा आउनुहोस् थाहा हुन्छ यसले तपाँईलाई मद्दत गर्न सक्छ भनेर । यसमा आउन कुनै पैसा लाग्दैन। http://facebook.com/groups/e4nepal
अनि उद्धमीहरुको बारेमा कहानी, सुझाब पढ्न मन भए हाम्रो वेवसाईट जानुहोस www.e4nepal.com
नेपालमा सुचना - प्रविधीको भर्खरै विकास हुँदैछ । देश विकासमा सुचना- प्रविधीले के भूमिका खेल्छ ?
सुचना- प्रविधीले चाडैँ नै सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक क्रान्ति ल्याँऊछ। हेर्दै जानुहोस् ! पाँच बर्षमा जब हामी हरेक नेपालीले आई फोन भन्दा शक्तिवान फोन बोकी, बाजुरा देखि खोटाङको खबर सेकेन्ड सेकेन्डमा पुर्याउन सक्छौँ, अशिक्षा, अज्ञानताको भरमा शोषित गर्नेहरुलाई परास्त गर्न यसले धेरै मद्दत गर्छ ।
देशमा भइरहेको राजनैतिक अन्योलता र अरु बिभिन्न कारणले लाखौँ युवा विदेशिने क्रम बढ्दो छ । के सन्देश दिनु हुन्छ युवाहरुलाई ?
सुझाब १: जिम्मेवार नागरिक र जवाफदेयी नेतृत्वले बनाउँछ शान्त र सम्पन्न नेपाल
सुझाब २: अहिले नगरे कहिले, हामीले नगरे कस्‌ले ?
सुझाब ३: नकारात्मकको जरो उखेल्न सबै साना-साना सकारात्मक शक्तिहरुलाई एकै दिशा तिर उन्मुख बनाउनु पर्छ हामीले।
सूझाब ४: तपाईँ दुष्टताको हाँगो काटी रहनु भा छ कि त्यसको जरो ? राम्ररी सोच्नुहोला ।
सुझाब ५: कुरा नया होईन, नया ढ्गँले गर्नुहोला ।
हामी नेपालीले आफ्नो-आफ्नो ठाँउबाट देश विकासमा के भूमिका खेल्न सक्छौँ ?
बोलेर होईन, गरेर बनाउने देश अब । हाम्रो देशमा पढे-लेखेका, बोल्न दक्ष भएकाहरु, सल्लाहकारहरु धेरै भए। अब मात्र गर्नेहरु चाहियो, बोल्ने, पढ्ने, लेख्‌ने होईन।
उज्वलको ब्लग लिङ्क: whynepal.com
मेरोरिपोर्टमा हालसम्म फिचर भएका साताका ब्लगरहरु
Comment by Arjun Apawad on September 5, 2012 at 10:04am
Comment by Prakash Lamichhane on August 30, 2012 at 10:26am
Comment by Dr. Surya B. Parajuli on August 30, 2012 at 8:25am
Comment by Shruti Shah on August 29, 2012 at 3:56pm